Vechidiki Vosimudza Mureza weZimbabwe Mumakwikwi eFirst Global 2017 Challenge
First Global - Team Zimbabwe
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana vari mumakwikwi e First Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC vanoti vane tarisiro yekuti vachakunda mumakwikwi aya.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nemusi weSvondo, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose.
Vachitaura pakuvhurwa kwemakwikwi aya, ayo akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano First Global, VaJoe Sestak, vakati ishuwiro vavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo zve Science ne Technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka.
Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zve Science, Technology, Mathematics ne Engineering.
Mumwe mudzidzi uye ari mutauriri wevadzidzi ava, Gamuchirai Nechitima, anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zve Science ne Technology kwete kutyira kure.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza wezimbabwe pachiitiko ichi, Anotida Ndachena, uyo anodzidza kuSt Georges, anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akawona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya.
Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School, Tariro Muzowaka, anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyange zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisineyi kuti anobva kupi.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa.
Muvhuro neChipiri chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuwona kuti muchina wavakagadzira ungahwine here kana kuti kwete.